Gburugburu ebe obibi mmetọ gburugburu - Jiangsu Senwei Eletrọniki Co., Ltd.
Sistemụ Ihe Nleba Emebi gburugburu ebe obibi
Ngwa: nchara, mmanụ ala, kemịkalụ, coking, ọgwụ na ọgwụ, igwe ihe, igwe anaghị agba mmiri, ihe eji arụ ụlọ, ike ọkụ, igwe mmiri nke ime obodo, na Ngwuputa
Wụnye modul eleba anya ike, nke nwere ike inyocha ikike oriri, ikike ịkekọrịta oge na ike a na-adịghị ahụkebe nke ụlọ ọrụ nsị mmiri na ozugbo.
Ghọta ikike nlere anya oge, ịdọ aka na ntị mbụ, nyocha na njikwa nke nrụpụta ụlọ ọrụ, mmechi, obere ọrụ, ike oriri na ebe njikwa ikuku na-enweghị ikike na arụmọrụ dị ala.
Ngwa: nchara, mmanụ ala, kemịkalụ, coking, ọgwụ na ọgwụ, igwe ihe, igwe anaghị agba mmiri, ihe eji arụ ụlọ, ike ọkụ, ọgwụ mmiri nke ime obodo, igwu ala.
Ihe ntanetị nke ikpo okwu gosipụtara profaịlụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ọnụ ọgụgụ ọkụ eletrik eletrik, akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ na-emetọ ikuku, na akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ mmetọ ikuku, lee anya na ndepụta 1:
———Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Gosiputa ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ejikọtara ọnụ, ọnụ ọgụgụ akụrụngwa na isi nlele, ọnọdụ arụmọrụ nke akụrụngwa njikwa mmetọ na ọnọdụ adịghị mma nke nkwụsị na mmachi mmepụta.
———Onu ogugu igu ike
Ihe eserese na-egosi ojiji ụlọ ọrụ eletrik eletrik nke ụnyaahụ na taa.
———Histogram nke arụmọrụ ebe akụrụngwa na-emetọ ikuku
Ihe onyonyo ihe osise n’egosiputa onwa awa ole eji arụ ọrụ iji mepụta ikuku na-ere ụnyaahụ na taa.
———Histogram nke oru ihe eji egbochi mmetọ
Histogram na-egosi awa ole ọrụ arụmọrụ na - achịkwa mmerụ ahụ ụnyaahụ na taa.
Usoro njikwa ọkụ eletrik na-emepụta ihe nrụpụta nke ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ekwesị maka nleba anya nke ike eletrik nke ụlọ ọrụ na-emepụta ụlọ ọrụ dị iche iche dịka elektrọnik, ụgbọ ala, igwe, igwe, nri, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Chịkọta akara akara ọkụ eletrik na saịtị, ị nwere ike ịlele ọnụ ọgụgụ nke ọkwa ụlọ ọrụ, akụrụngwa ihe omumu ihe, isi ihe nyocha, gụnyere ọnọdụ mmepụta, ọnọdụ akụrụngwa, ugbu a, voltaji, ike elele, ike, wdg. taa usoro egosila. Nwere ike ịhọrọ oge akọwapụtara wee rụpụta usoro. Ikike ike ya na akụkụ ya nwere ikike mbido ngwaọrụ ma kwụsịtụ, ikike ike ụlọ ọrụ na-egosiputa ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ.
Dabere na mmalite mmalite na nkwụsị, kpebie ma oge nrụpụta kwekọrọ na oge ọrụ nke ebe njikwa mmetọ ahụ, yana ma enwere esemokwu oge nkwụsị na atụmatụ mmụpụta, dị ka egosipụtara na ọnụ ọgụgụ a:
Site na nyocha mmekọrịta, nyocha ihe karịrị, nyocha nkwụsị oge, nyocha ihe na - adịghị mma dịka akụrụngwa nchedo gburugburu anaghị agbanwu, na - emechi emechi na nke aghụghọ, idling, belata ugboro, wdg. N'otu oge ahụ, site na nyocha data, ezigbo Enwere ike idozi oge maka mmachi usoro na nbipụta mmepụta ya. Hụ dị ka eserese 3: